Khasaare Ka Dhashay Is Rasaaseyn Ka Dhacday Suuqa Xamarweyne – Goobjoog News
in amaanka, Banaadir
Ciidamada booliska dagmada X/weyne oo is ku dayayey in ay gacanta ku dhigaan koox burcad ah ayaa iyaga iyo burcaddii waxaa is rasaaseynku dhex martay suuqa dagmada Xamar-weyne,.
Kooxda burcada ah ayaa la sheegay in ay ka koobnaayeen 3 ruux kuwaas oo doonayay inay dhac u geystaan dadka u soo dukaameysi tagay suuqa iyo kuwa ku suganba, maadaama suuqa aad u badan tahay saxmadiisa oo dadkuna u diyaar garoobayaan munaasabadda Ciida.
Khassare ayaana Ka Dhshay Israsaaseynta ka dhacdey Suuqa Xamarweyne. ilo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in caawa ay ciidamada boliiska degmada X/Weyne ayaa sheegay in ay ku guuleysteen iney gacanta ku soo dhigaan 3 burcad hubeysan oo dhacaayay shacabka suuqa ka soo doontay adeega ciida.
Burcadka ayaa dagaalamay, israsaaseyn ka dib sadaxdii burcad oo mid dhaawac yahay ayaa gacanta lagu dhigay. Sadax shacab ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray hal kalena ku dhintay israsaaseynta burcadka oo galay goob dukaan.
Darawal Gaari BL Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo Iyo Ra'iisul-wasaare Abiy Oo Ku Kulmay Magaalada Addis-Ababa.